သိမှုဆိုင်ရာကိရိယာ: Open Source Deep Learning SW | Linux မှ
Cognitive Toolkit - Microsoft Open Source Deep Learning SW
Microsoft's Cognitive Toolkit သည်ယခင်က CNTK ဟုခေါ်သည် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုကိရိယာတန်ဆာပလာ (Machine Learning) de «Código Abierto» ကြီးမားသောအလားအလာနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်လည်းလွယ်ကူသည် စီးပွားဖြစ်တန်းအရည်အသွေး ၎င်းသည်လူ့ ဦး နှောက်နှင့်နီးစပ်သောအဆင့်တွင်သင်ယူနိုင်သည့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု algorithms များဖန်တီးနိုင်သည်။
ဖန်တီးသူမိုက်ခရိုဆော့ကဒီ open source tool သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများနှင့် algorithms များနှင့်အတူအလျှော့မပေးသောချုံ့ချဲ့မှု၊ အရည်အသွေးကောင်းမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။
ထိုအကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု algorithms လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်း အခြားအလားတူကိရိယာများထက်ပိုမြန်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်တိကျသောဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲကျယ်ပြန့်သောပတ် ၀ န်းကျင်များ (CPUs, GPUs, Cluster of Equipment) တွင်ထိရောက်စွာချုံ့နိုင်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ခေတ်မီဆန်းကြယ်သော algorithms နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစာဖတ်သူများနှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည် ကြီးမားသောဒေတာအစုနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ရန်။ အလားတူကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များတွင်လျှောက်ထားသည် Skype၊ Cortana, Bing နှင့် Xbox။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကြီးကျယ်သောနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်းအသုံးပြုသည် «Inteligencia Artificial (IA)» စီးပွားဖြစ်တန်း။ ၎င်း၏အဘို့, အားလုံးအထက် C ++ နှင့် Python တို့ကိုထောက်ပံ့သည်သင်သည်သင်၏ရှိပြီးသားသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေး algorithm ကိုနီးပါးစိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုသည်။
1 Cognitive Toolkit: အဲဒါကဘာလဲ။
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း ၂.၇ ဖြစ်သော Microsoft မှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Deep Neural Networks, Convolutional နှင့် Recurrent ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးပုံစံများကိုအသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မျိုးစုံသော GPU များနှင့်ဆာဗာများအကြားအလိုအလျောက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အပြိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ stochastic gradient descent learning ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
၎င်းကို Python၊ C # သို့မဟုတ် C ++ ပရိုဂရမ်များမှစာကြည့်တိုက်တစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်ဖော်ပြချက်ဘာသာစကား (BrainScript) မှတဆင့်သီးခြားနက်ရှိုင်းသောလေ့လာရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် Java နှင့်ဖန်တီးထားသောပရိုဂရမ်များမှ၎င်း၏အကဲဖြတ်မှုကိုအသုံးချနိုင်သည်။
၎င်းသည် precompiled binary packages များမှတဆင့်သို့မဟုတ် GitHub တွင်ထားရှိသောမူလအရင်းအမြစ်ဖိုင်များကို သုံး၍ Linux 64-bit သို့မဟုတ် Windows 64-bit Operating Systems နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
မှတ်စု: Cognitive Toolkit အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းတို့ထံသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Microsoft မှာဖြစ်စေ၊ GitHub.
El «Intercambio de Redes Neuronales Abiertas (Open Neural Network Exchange - ONNX)» developer များကိုခွင့်ပြုသောပွင့်လင်းသောဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် «IA» သင်၏စီမံကိန်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှမှန်ကန်သောကိရိယာများကိုရွေးချယ်ပါ
Y သိမှု Toolkit ကို ၎င်းသည်ကူညီပံ့ပိုးရန်ပထမ ဦး ဆုံးနက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုဆိုင်ရာကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် ပုံစံ «ONNX»။ ကြောင်းပုံစံ Microsoft ကပူးတွဲတီထွင်ခဲ့သည် နှင့်များစွာသောအခြားသူများကထောက်ခံခဲ့သည်။ သောကြောင့်, «ONNX» developer များကဲ့သို့မူဘောင်အကြားမော်ဒယ်များရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် Cognitive Toolkit, Caffe2, MXNet နှင့် PyTorch.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ «ONNX» များအတွက်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ပုံစံကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ၏မော်ဒယ်များ «IA» နှင့်တစ် ဦး သတ်မှတ် ဂရပ်ဖစ် extensible ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ထည့်သွင်းထားသောအော်ပရေတာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဒေတာအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လိုအပ်သောစွမ်းရည်များကိုအာရုံစိုက်သည် အခြဖြစ်စဉ်များ (အမှတ်ပေး) ။
မှတ်စု: ပိုမိုသိရှိလိုပါက «ONNX» အောက်ပါလင့်ခ်တွင်ကြည့်ပါ Neural Network Exchange ကိုဖွင့်ပါ.
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ်" ဒီအခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ software ကိုအကြောင်းကို «Código Abierto» del Microsoft Open Application ဂေဟစနစ် ခေါ်ဆိုခ «Cognitive Toolkit»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Cognitive Toolkit: Open Source Deep Learning SW
သင်၏ Ubuntu ပေါ်တွင် Print Screen ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းကို clipboard သို့ကူးယူတော့မည်မဟုတ်လော။ ဒါဆိုခင်ဗျားကဖြေရှင်းလို့ရတယ်